University of Medicine, Mandalay Alumni Association
ဆေးတက္ကသိုလ် မန္တလေး ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်း
UMMAA Virtual Homecoming Day Ceremony 2021 Video
UMMAA - 07/Jan/2021
ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ (၂၀၂၀)
ဆရာကြီး ဆရာမကြီးများအား ကန်တော့ခြင်း
ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး ဝန်ထမ်းများ ဆရာ ဆရာမများကို ECG နဲ့ BMI တိုင်းတာစစ်ဆေးပေးခြင်း
Covid19 Temporary Camp အတွက် အလှူငွေများ လှူဒါန်းခြင်း
UMMAA - 02/Jul/2020
UMM Clinic တွင် HbA1C စစ်ဆေးပေးခြင်း
Homecoming Day အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ
Bank Name : AGD Bank
Branch : MANDALAY MINI-2 (Phone No. 02-67145)
Name of Account : UNIVERSITY OF MEDICINE, MANDALAY ALUMNI ASSOCIATION (UMMAA)
Account Number : 3350101000286014
နိုင်လင်းထွန်း (ဆေး/မန်း) - 17/Sep/2020 0
ဆေး-မန်း သမိုင်း၏ အပိုင်းအစများ
ဒေါက်တာထူးထူး - 14/Sep/2020 0
ကျွန်တော် မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ်မျာ ၁၉၈၄ ကနေ ၁၉၉၄ ခုနှစ် အထိ ပညာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ မင်းသားကြီးကျော်ဟိန်း စကားနဲ့ ပြောရရင် “၁၀”နှစ်ပေါ့။ သမိုင်းကို မေ့လျော့နေတဲ့သူတွေနဲ့ ဆုံရင် ကျွန်တော်တို့ကို စာမေးပွဲကျနေသလားလို့ ထင်တတ်ပါသေးတယ်။ သမိုင်းဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ အဲဒီအတိတ် သမိုင်းထဲက ထူးထူးခြားခြားမှတ်မိနေတဲ့ ကိစ္စအချို့ကို...
စေတနာ… စေတနာ ဘယ်ကလာ
ဆွေကြည်အေး - 10/Sep/2020 0
၁၉၆၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ(၁)ရက်နေ့။ ဖြူဖြူပုပုလုံးလုံး မြင့်မြင့်ခိုင်။ ဖြူဖြူရှည်ရှည် လဲ့လဲ့ဝင်း။ နှာတံပေါ်ပေါ် ခင်မေဝင်းနှင့် ကျွန်မ။ ဟိတ်ဟန် သိပ်မကြီးသော မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်းကြီးထဲသို့ တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်နဲ့ ဝင်လာကြသည်။ ကျောင်းကြီးက အိန္ဒြေရရ ဆီးကြိုနေပေမယ့်၊ မယ်သစ်လွင် ကျွန်မတို့လေးယောက်သားရဲ့ ရင်တွေကတော့ အိန္ဒြေမရ၊ ပရမ်းပတာ ခုန်နေကြမည် ထင်သည်။ Katie မြင့်မြင့်ခိုင်က...
အော်ဂက်စ်ထရာ (Orchestra) တဲ့လား
ခင်သစ်နှင်း - 07/Sep/2020 0
ဟိုး … ငယ်ငယ်လေးကတည်းက တယ်လီဗွီးရှင်းထဲမှာ အော်ဂက်စ်ထရာ အသံကြားရရင် ရောက်တဲ့ နေရာကနေ လုပ်လက်စ အလုပ်ချပြီး TV ရှေ့ကို ကျွန်မအပြေးရောက်စမြဲ။ ယုတ်စွအဆုံး စာကြည့်နေချိန်မှာတောင် TV ရှေ့ကို ရောက်အောင်သွားခဲ့တာ။ တီးတိုးညင်သာစွာ တီးခတ်နေရာကနေ သံစဉ်တွေ ဆွဲဆွဲငင်ငင်နှင့် မြင့်လာပြီး ပြင်းပြင်းရှရှ...
အဆောင်လွမ်းချင်း – ၁
ဘဟန်ဦး - 04/Sep/2020 0
အဆောင်နေခဲ့သူတိုင်း အဆောင်ကို လွမ်းကြသည်။ လွမ်းစရာတွေရေးလျှင် ပြီးတော့မည် မထင်။ မှတ်မှတ်ရရဖြင့် လွမ်းစရာ အဖြစ်အပျက်ပေါင်း များစွာရှိသည်။ တွေးမိသည်နှင့် ရုပ်ရှင်ပြသလို တစ်ကွက်ပြီး တစ်ကွက် ပေါ်လာသည်။ သို့သော် ကျွန်တော့်အလွမ်းမျိုး လွမ်းမိ လွမ်းတတ်သည့်သူ ရှိလိမ့်မည်မထင်။ မိမိတို့ အတန်းသည် ဒေသကောလိပ် သက်တမ်းတွင် နောက်ဆုံးနှစ်...
အိမ်ပြန်ချိန် စာစောင် ၂၀၂၀
အိမ်ပြန်ချိန် စာစောင် ၂၀၁၉
UMM Research Conference 2019
UMM Research Conference 2018
Lifestyle Center (Wellness, Weight & Diabetes Management) ၂၅% မှ ၅၀% အသင်းဝင် အထူးလျှော့ဈေး ပိုမိုသိရှိရန် Royal Mandalay Restaurant ၅% အသင်းဝင် အထူးလျှော့ဈေး ပိုမိုသိရှိရန် လူထု - ဓါတ်ခွဲခန်း ၁၀% မှ ၂၀% အသင်းဝင် အထူးလျှော့ဈေး ပိုမိုသိရှိရန် ထက်ဝေလျှံ (အကြော အဆစ်အထူးကုဆေးခန်း) ၁၀% အသင်းဝင် အထူးလျှော့ဈေး ပိုမိုသိရှိရန်
UMMAA - 07/Jan/2021 0
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ (၄) ရက်နေ့က ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော UMMAA Virtual Homecoming Day Ceremony 2021 အစီအစဉ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ သက်ဆိုင်ရာ Facebook Link များသို့ ဝင်ရောက်၍လည်း မှတ်ချက်များ ရေးသားနိုင်ပါသည်။ Part 1 - UMMAA Virtual...
Invitation: UMMAA Virtual Homecoming Day Ceremony 2021
5th UMM Homecoming Day Commemoration Campaign
ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး ဆရာဆရာမများ ရန်ပုံငွေ IMRTF (Institute of Medicine Retired Teachers Fund) UMM...
မန္တလေးဝိသာခါ ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေး ဖောင်ဒေးရှင်း မှ ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေးဝင် 12/2018 Batch ကျောင်းသားကျောင်းသူများ (၈) ဦးအား...
ပထမနှစ် အမ်ဘီဘီအက်စ် (၁၂/၂၀၁၇) သင်တန်းမှ ကျောင်းသားများနှင့် အလှူရှင်များတွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနား
Golden Jubilee Doctors မှ UMMAA အထွေထွေရန်ပုံငွေအတွက် အလှူငွေကျပ် (၅)သိန်း ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်း
ဒေါက်တာကျော်စော (စာပန်းအိမ် ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း) မှ ပညာရေးသုတေသနရန်ပုံငွေ အတွက် ငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀) ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်း
ဒေါက်တာမိုးမိုးထွန်း (မိုးသောက်နှင်း ကုမ္ပဏီ)မှ Common Research Laboratory တွင်သုံးရန် Voltage Regulator အတွက် (1000...
ဒေါက်တာကြည်ရှင် + ဒေါက်တာကြူကြူ (ညိမ်းနှင့်မြို့တော်အဆင့်မြင့်ဆေးရုံမိသားစု) မှ ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး တွင် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အလှူငွေ သိန်း(၃၀၀)...
ဆေးတက္ကသိုလ်- မန္တလေး ၊ လမ်း၃၀ ၊ ၇၃ လမ်း နှင့် ၇၄ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေး။
+၉၅ ၉ ၄၅၂၆၁၀၀၇၇ ၊ +၉၅ ၉ ၄၅၂၆၁၀၀၈၈
© မူပိုင်ခွင့် ၂၀၂၀ - မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်း